बेलबारी र आसपासका क्षेत्रमा पनि नाटकको क्रेज बढेको छ । - betanadaily.com
बेलबारी र आसपासका क्षेत्रमा पनि नाटकको क्रेज बढेको छ ।
बिकास बुढाथोकी (सञ्चालक,सृजनाघर तथा लेटस ईन्टरटेन्मेण्ट)
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फाल्गुण २५, २०७७ समय: ५:०३:५९
बेलबारी । मोरङको बेलबारीमा रंगकर्मीहरुलाई स्थापित गर्ने र यो क्षेत्रको पहिचानका लागि अहोरात्र खटने युवाको नाम हो बिकास बुढाथोकी । केही न केही सिर्जना मार्फत बेलबारीको परिचयलाई उनले मोफसलदेखि राजधानी सम्मलाई जोडने प्रयास गरेका छन । उनले राष्ट्रिय स्तरका थिएटरका कलाकार र राष्ट्रिय कविलाई बेलबारीमा ल्याएर कार्यक्रम गर्न सफल भईसकेका छन ।
लेटाङ मा२०४४ असार १ गते जन्मिएको उनले बेलबारीको गोदावरी बिद्या मन्दिरबाट कक्षा ७ सम्म भगवती माध्यमिक बिद्यालयबाट एसएलसी ईटहरीको विश्व आर्दश कलेज र काठमाण्डौको त्रिचन्द्र कलेजबाट उच्च शिक्षा अध्यायन गरेका छन । इङ्ल्यान्डमा ६ बर्षको बसाई पछि नेपाल फकिएर रंग क्षेत्रमा होमिएका उनले लेट्स इन्टरनेनमेन्ट र भर्खर सृजनाघर नामको संस्था सञ्चालन गरिरहेका छन । ईङ्ल्याण्डमा हुदै देखि नेपाली बालबालिकाको लागि काम गर्ने बेलायती संस्था (किवानिज क्लब) र जेसिजमा आबद्ध भएर काम गरेको उनको अनुभव छ ।उनी लेखनमा समेत रुचि राख्छन । उनले बालकथाका पुस्तक समेत प्रकाशन गरेका छन । उनले पछिल्लो समय सञ्चालन गरेको सृजनाघर र यस्का गतिबिधिका बारेमा गरिएको कुराकानीका सम्पादित अंशहरु –
१.सृजनाघर के हो ?
सृजना गर्न रमाउनेहरूका लागि चिन्तन मनन् र बिमर्श गर्ने थलो हो, सृजनाघर । व्यक्तित्व विकासको लागि कलाको आवश्यकतालाई महसुस गरेर सृजनात्मक कार्यहरु गर्ने घर हो ,सृजनाघर।
२.सृजनाघर भित्र के के छन् त ?
सृजनाघरमा सृजनात्मक सिकाइ र अभ्यासका लागि एउटा कार्यशाला कक्ष , साहित्यक पुस्तक साथै अन्य सबै सृजना सहयोगी सामाग्री पाउने पुस्तक पसल , पुस्तक पारखीका लागि पुस्तकालय, सृजनात्मक कार्यक्रम गर्न पर्फमेन्स सेन्टर, प्रदर्शनी का लागि आर्ट ग्यालरी र एउटा चिया पसल छ ।‌ यसमा एउटा नाटकघर पनि हुने छ ।
३.सृजनाघरमा के भईरहेको छ ?
बालबालिकाहरुको व्यक्तित्व विकासकालागि हरेक दिन बिहान र बेलुकाू चिल्ड्रेन क्रिएटिभ ‌क्लब संचालन गरिरहेका छौं। यसमा हामी स्कुलको होमवर्क गर्न सहजिकरण,नाटक, संगीत, नृत्य, आर्ट र व्यवाहारिक सिप सिकाइन्छ । चित्रकलाको कक्षा आइतबार र शुक्रबार बिहान भईरहेको छ । यही २६,२७ र २८ गते एउटा नाटक मञ्चन गर्दैछौं।
४. कुन नाटक मञ्चन गर्दै हुनुहुन्छ ?
लालिगुराँस साकोस र जिल्ला बचत मोरङ को सभा हललाई नाटकघरमा रुपान्तरण गरेर नाटक ू खोपडी भित्रका मान्छेहरुू मञ्चन गर्दैछौं । नाटक यही २६,२७ र २८ गते बेलुका ५.०० मञ्चन गर्दैछौं । नाटक हेर्नका लागि रु।३००‌ र रु। ५००‌‌ को टिकट लाग्ने छ । विद्यार्थीहरुको लागि रु।१०० को टिकट रहेको छ।
५.टिकट काटेर नाटक हेर्ने दर्शक छन् त बेलबारीमा ?
धेरै हुनुहुन्छ । बेलबारीमा हामीले यस अघि नाटक देखाउदा रु ५०० को टिकट काटेर एक हजार भन्दाबढीले हेर्नु भएको थियो । बेलबारी बाहिर पनि हामीलाई र नाटकलाई माया गर्नेहरु साथीहरु हुनुहुन्छ । सबैको सहयोगले यो नाटको मन्चन सफल हुन्छ भन्नेमा ढुक्क छौं।